Hlola iSochi, eRussia - World Tourism Portal
Hlola iSochi, eRussia
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eStohi, eRussia.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeSocrhi
Bukela ividiyo ekhuluma ngoSochi
Hlola uSlohi enye yezindawo eziseningizimu impela Russia nedolobha lesibili ngobukhulu laseKrasnodar Krai, elinabantu be-415,000. Itholakala ogwini loLwandle Olumnyama, cishe i-1,600km (995 mi) eningizimu ye Moscow.
ISochi ivame ukubizwa ngokuthi yi- "Summer Capital" yaseRussia, noma iBlack Sea Pearl. Lesi indawo enkulu kunazo zonke futhi ebabazekayo yolwandle ehlobo, eheha izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezine unyaka nonyaka ogwini lwayo lwezintaba olumangalisayo, amabhishi angena shingle, izinsuku ezifudumele zelanga, nobusuku obumnandi obumnandi. Ukusuka ngoMeyi kuya kuSepthemba inani labantu baseSochi okungenani liphindwe kabili ngabavakashi, kufaka phakathi osaziwayo kanye nezikhulu zezepolitiki zezwe.
Okumangazayo ukuthi ngamaphesenti amathathu kuphela alesixuku sezivakashi angabahambi abavela kwamanye amazwe, futhi ngisho nomngcele wedolobha akusizi ukushintsha lesi simo. Mhlawumbe isivakashi sangaphandle esingesosopolitiki esidume kunazo zonke kwakunguBono, owayemenywe ukuthi ayochitha isikhashana lapho kuhlala uMongameli Medvedev e2010. Kepha, ngokuvamile, leli dolobha lihlala liyindawo yokuhlala yasekhaya kakhulu, ngandlela thile lintula ingqalasizinda efanelekile yamazwe omhlaba futhi inesizinda esifanayo sezilimi izikhungo eziningi zaseRussia zenza.
USochi waziwa umhlaba wonke kwi2007, lapho ewina ibhidi lokusingathwa kwemidlalo yama-Olimpiki Wasebusika ye2014 kanye neParalympic.
ISochi inezinto eziningi ezingahle zithandelwe noma ngubani othanda imvelo, ezemidlalo, umlando nokuzilibazisa okushiswa yilanga.
Indawo yeSochi yanamuhla yayihlalwa izinkulungwane zeminyaka, yayinezizwe zezintaba zaseCaucasi futhi ngaphansi kokuthonywa nokubuswa yimpucuko yasendulo yamaGrikhi, amaRoma, amaByzantine, ama-Abkhazian kanye nama-Ottoman. Izimpawu ezimbalwa zempucuko yangaphambilini zasala, kufaka phakathi amatshe amatafula we-Bronze Age namathempeli aphakathi weByzantine.
UMbuso WaseRussia wasondela kula mazwe ekuqaleni kwekhulu le-19th, kwathi ngemuva kwempi noMbuso wama-Ottoman wawathola ku1829. Ngokushesha emva kwalokho, e1838, iziphathimandla zaseRussia zamisa inqaba yase-Alexandria, endaweni yeCentral Sochi yanamuhla, kanye ne-2 amafomu angaphezulu esifundeni sanamuhla seLazarevskoe. I-Alexandria yaqanjwa kabusha kaningana futhi ekugcineni yathola igama elithi Sochi (igama lomfula wendawo) e1896.
ISochi ingeyaleyo ngxenye encane yeRussia, etholakala ngenkuthalo esifundeni sezulu esisesimweni esiphansi. Ngokungafani nezimo zezulu zaseMedithera. Naphezu kwezulu eliphakeme, uSocrhi ujabulele izinsuku ezingama-300 ezinelanga minyaka yonke, okuyinto engakholeki kunoma iyiphi enye ingxenye Russia ngaphandle kwamadolobha asogwini lwaseKrasnodar Krai. Lokhu kwenza cishe wonke unyaka ukhululekile ukuvakashela iSochi, ngaphandle kukaNovemba kuya kuJanuwari.
Ngaphakathi neCentral Sochi amabanga amaningi ayakwazi ukuhamba, ngokubheka ukubukeka komhlaba onezintaba nemizamo efanelekile yomzimba edingekayo (khumbula ukuthi umthamo omkhulu wokwakha ngaphambi kwama-Olimpiki e-2014 wenze ezinye izindawo zalingafaneleki). Ezinye izifunda zedolobha zinezikhala ezibalulekile phakathi kwezingxenye zazo, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa ezokuthutha.
Vakashela ipaki yaseNautilus Aqua, iPobedy str., 2 / 1 - Lazarevskoe.
Zama i-Yachting, Kite surfing, Alpine skiing
Thenga amakhono endawo
Itiye leKrasnodar. Lona kuphela uhlobo lwetiye elitshalwe eRussia, ngokuba yilona elisenyakatho kakhulu emhlabeni (ngenxa yezimo zesimo sezulu, akunakwenzeka ukulima itiye lisenyakatho lisuka eSocrhi). Amahlathi atshalwa ngetiye eGreater Sochi atholakala eDagomys, Solokhaul (esifundeni saseLazarevskoe) nase-Adler. Inani lokukhiqizwa kwabo lilinganiselwe, ngakho-ke akulula ukuhlangana nalo ngaphandle kweKrasnodar Krai. I-Baloven tea brand ka-Dagomys Tea Plant iyatholakala ezitolo zakwaSochi. Ukuvakasha kweqembu ezitshalweni zetiye kuyatholakala.
Utshwala bendawo. Ngokumangazayo, iRussia ngumkhiqizi wewayini omkhulu kakhulu we-11th emhlabeni. I-60% yawo wonke amaRussia akhiqizwa eKrasnodar Krai. KuSlohi nasezindaweni ezizungezile kungenzeka ukuthi uthenge izinhlobo eziningi zalesi siphuzo, kusukela kwewayini elenziwe elenziwa ekhaya nemakethe emabhodleleni epulasitiki angenawo uphawu, eqeda ngewayini le-premium-class ubudala ne-brandy emabhokisini ayisikhumbuzo. Ukuze ugweme ukukhiqizwa komkhiqizo oyinyumba, thenga ezitolo ezinkulu zedolobha, njengeMagnit, iKarusel, iKairosor Perekryostok.
I-Abrau Durso newayini elikhazimulayo. I-Abrau Durso (isitshalo esiseduze kwaseNovorossiysk) ihamba phambili futhi ingumkhiqizi owaziwayo waseRussia ogcwele uhlu lwamawayini acwebezelayo, kusuka ku-“Shampagne yaseSoviet” eya eqoqweni lama-Imperial neMillesimewine elikhethekile. Ubuchwepheshe bokukhiqiza bususelwa kunendlela yendabuko yama-shampagnoise. I-Abrau Durso iwayini ihanjiswa kuzo zonke izifunda zaseRussia futhi zithunyelwa kwamanye amazwe. Intengo iyahlukahluka ngokuya ngento yokuqoqa.
Iewayini zase-Abkhazian. Kunezinhlobo eziningi zewayini ezivela e-Abkhazia lezo ezivame kakhulu ezitolo zaseRussia futhi zithandwa ukunambitheka kwazo okwenziwe ngomumo. U-Apsny - iwayini elibomvu elinoshukela kusuka kuxutshwe neCabernet, Sovignon, Merlot negilebisi likaSaperavi. I-Chegem) - iwayini elibomvu elomile kusuka kugilebhisi zaseCabernet. ILykhny - iwayini elibomvu elinoshukela kusuka ku-Isabella yamagilebhisi. I-Psou - iwayini elimhlophe elinoshukela omhlophe ovela e-Aligote nase Riesling.
Amawayini weBrand weKrasnodar Krai. Imikhiqizo yetiye yetiye lesezingeni lelisetulu tifundza i-Fanagoria neMyskhako, tikhicitwe endzaweni yaseNovorossiysk kanye ne-assortment lebaningi.
Ugologo. Lesi siphuzo esidakayo sibizwa ngeConcac emakethe yasekhaya yaseRussia, kepha sithunyelwa ngaphandle njengeBrandy ngenxa yesidingo sokulandela ilungelo lobunikazi lesifundazwe saseCognac France. Ngokubambisana neDagestan neStavropol Krai, iKrasnodar Krai iphakathi kwezifunda ze-3 zaseRussia, lawo magilebhisi amukelekile ekukhiqizweni ngohlobo oluthile. Ifektri yedolobha laseTemryuk eliseduzane naseTaman yenza uhlobo oluhle kakhulu lwaseKrasnodar Krai, okubandakanya ukuqoqwa kwabadala nabadala.
IKrasnodar Krai cishe ingenye yezindawo eziphephe kakhulu zaseRussia Russia. ISochi ayihambisani nezinga lobugebengu eliphakeme, kepha kumele kusetshenziswe izinyathelo ezijwayelekile zokuphepha. Kunesisho eRussia: "Amaright amnyama eSocrhi" futhi lokhu kungachazwa ngokuthi noma ngubani noma yini angalahleka edolobheni.
Ngaphandle kancane kweSochi
Lapho sekubuye ukuzimela kokuchuma kolwandle okuchumayo kanye nengxenye yeSoviet Georgia, le ndumezulu yezentaba yaseCaucasan yadlula empini yombango enegazi namaGeorgian ngemuva kokuwa kweSoviet Union, yamemezela ukuzimela kwayo futhi yesekwa yiRussia, kepha nokho amazwe amaningi engazange ayazi. Uthandwa ngokweqiniso izivakashi eziningi zaseRussia, i-Abkhazia ayaziwa kakhulu ngabahambi abavela kwezinye izingxenye zomhlaba.
I-Abkhazia incane impela futhi ingatholakala ngokushesha kungakapheli isonto, kepha ukuhlala isikhathi eside kuyadingeka ukuthola umbono ojulile. Isigodlo nomhume oseNew Athos, kanye neLake Ritsa, ngokuqinisekileyo ziphakathi kwezindawo ezimangalisa kakhulu oLwandle Olumnyama. Lobuhle obumnandi obuhlanganiswa nobuphofu base-Abkhazian kanye nezinsalela zempi yombango ngeke zishiya akekho ongahlukani. Abantu bendawo banomusa kakhulu, kepha bambalwa kuphela abayoqonda noma yini ngesiNgisi.
ISochi ukuphela kwendawo ene-Abkhazia yokuwela umngcele ovela ohlangothini lwaseRussia. Kunendawo lapho uwela khona eVesyoloe (ingxenye eseningizimu yesifunda sase-Adler). Inganqamula bobabili ngezinyawo nangemoto / ngebhasi (amabhuloho amabili ahlukene ngomfula weP Psou). Ukuza e-Abkhazia ngezinyawo, uzothola indawo yokupaka i-marshrutka ngemuva kwebhuloho - ithuba elishibhile lokufinyelela noma ikuphi lapho uya khona ukhiye wezwe. Inhlokodolobha yase-Abkhazian Sukhum nayo ingafinyeleleka ngebhasi eliqondile elivela kwaSochi, kanti nesitimela sokuhamba (i-elektrichka) kuhlelwa ukuthi siqale ukusebenza e2011. Kukhona futhi nenketho yokufika eGagra, e-Abkhazia ngesikebhe esivela echwebeni leShihi.
Ukuya e-Abkhazia kulungele ukuthobela izidingo ze-visa zase-Abkhazian. Yazi futhi ukuthi, ukubuyela emuva eRussia ngemuva kohambo, ungadinga ukungena ama-visa amabili noma okufakwayo kwamaRussia amaningi.
Kuboshwe ngokuphelele ku-Krasnodar Krai ukuzimela okuncane kwezwe, okungomakhelwane eGreater Sochi, i-Adygea inamandla amakhulu abavakashi, okungabukelwa phansi okwamanje. Ukugudla, ukubona kwamanzi, ukuhamba kanye neminye imisebenzi yasezintabeni phambi kokubukwa okumangalisayo kweCaucasus kwenza le ndawo iyathembisa kakhulu. Kubalulekile futhi ukuthi i-Adygea iphephe ukwedlula noma yisiphi esinye isifunda saseCaucasian ngaphandle kweKrasnodar Krai.
IMaykop, inhloko-dolobha yase-Adygea, iyatholakala kusuka eSochi ngesitimela (nsuku zonke, amahora we-6) nangebhasi (amabhasi we-1-2 nsuku zonke kanye namabhasi wokuhamba, amahora we-8). Kukhona futhi nenketho yokufinyelela i-Adygea ngemoto (amahora we-6-8 ngeTufall). Okunye okwehlukile kulokho umgwaqo oqondile ongagudliwe ogcwele izintaba ohlanganisa iSochi ne-Adygea ngamagquma weCaucasus. Yiba ngaphezu kokuwusebenzisa ngokucophelela.
ICaucasian Biosphere Reserve
Le ndawo yemvelo inendawo yesibili evikelwe ngobukhulu eYurophu futhi yona enkulu kunazo zonke eziNtabeni zaseCaucasus. Ihlala ezintabeni zaseKrasnodar Krai, Adygea naseKarachay-Cherkessia, kufaka phakathi ingxenye yendawo yedolobha elikhulu laseGreater Sochi (isifunda saseKhosta kanye neKrasnaya Polyana), emngceleni weSochi National Park.
ICaucasian Biosphere Reserve ingumcebo ocebile kakhulu wezinto eziphilayo, engenakho ukufana eRussia kanye nenani lomhlaba wonke njengengxenye yemvelo engakaze ifundwe enezindawo zokuhlala eziyindilinga. Ngokufanelekile, le ndawo ehlukile ifakiwe kuLuhlu lwamagugu omhlaba lwe-UNESCO. Indawo esemthethweni yokubhuka itholakala ngesiRussia kuphela.
Izingxenye ezimbili ezibunjiwe zendawo yokubhuka, ezitholakala ngaphakathi kweGreater Sochi, kulula ukuzivakashela: izinkuni ze-yext & i-boxtree eKhosta kanye nelahlengikazi bezilwane zasendle eKrasnaya Polyana. Ukuze uvakashele ezinye izingxenye zesibekelo, udinga ukuthola imvume ekhethekile, edinga okulandelayo:
imininingwane yamaphasiphothi namakhophi epasipoti omhlanganyeli ngamunye,
igama lomholi weqembu,
indlela ehleliwe / uhambo,
isikhathi sokuhlala (inani lezinsuku),
KuSoshi ungathola imvume endaweni yokubekelwa indawo yokubhuka: umgwaqo iKarl Marx, i-8, igumbi 10, esifundeni i-Adler, eSochi.
Idolobhana elingasogwini elisogwini loLwandle Olumnyama kuya enyakatho-nentshonalanga ukusuka eSochi, enye yezindawo ezithandwa kakhulu zasehlobo zaseRussia. IGelendzhik inezinto zemvelo nezokungcebeleka ezikhangayo. I-aquapark kaGelendzhik iyindawo enkulu kunazo zonke kuleli, futhi izindawo ezikuyo zinendawo enhle kakhulu. Idolobhana likhaya leIntanethi Yezindiza Zasolwandle, eqhutshwa lapho iminyaka emibili.
IGelendzhik yindawo yokuhamba yamabhasi amaningana ahamba ngeSocrhi (4-5 nsuku zonke). Ukugibela kuzothatha amahora we-5.5. Isikebhe sasolwandle esisheshayo esisuka eSokhi siya eNovorossiysk futhi emuva sibuye sime lapho I-Gelendzhik.
Leli dolobha elikhulu kunazo zonke leKrasnodar Krai i3rd liyitheku elikhulu kunazo zonke laseRussia oLwandle Olumnyama kanye nesikhungo esikhulu sezimboni usimende eSouthern Russia. Iningi lezindawo ezivakashelwa ngabavakashi kuleli dolobha lihlobene neMpi Yezwe Yesibili, lapho iNovorossiysk yayiphakathi kwezimpi ezibalulekile zaseRussia. Isikhumbuzo esaziwa kakhulu yiMalaya Zemlya, i-Defence Line (iRubezh Oborony) ne-Death Valley (iDolina Smerti).
Izindawo eziseNovorossiysk zinemvelo enhle yezinyawo zamagquma aseCaucasus. Esiqongweni sezimangaliso zendalo zendawo kukhona ichibi elikhulu le-Abrau, elikhulu kunazo zonke eNyakatho neCaucasus. Eduze nje lapho kwenziwa khona i-Abrau-Dyurso eduzane kwewayini, okwenza le ndawo ibe yinhlokodolobha ye-Russian champagne / newine ekhazimulayo (izinkambo eziya e-Abrau-Dyurso ngokuhlolwa kwewayini ziyatholakala). Kukhona futhi izindawo zokuvakasha zasolwandle ezimbalwa eziseduze nedolobha.
Kunezindlela eziningana zokuthola kusuka kuScohi ukuya eNovorossiysk. Amabhasi ahamba nsuku zonke (amahora we-8.5). Ukuxhunyaniswa kwesikebhe esisheshayo ngesikebhe olwandle kusebenza kusuka ngoMeyi kuya ku-Okthoba, izikhathi ze-3 ngesonto (ngoMsombuluko, ngoLwesithathu nangoLwesihlanu). Ukuhamba ngendlela eyodwa kuzobiza i-1,800-2,700 RUR, kuthatha cishe amahora we-5. Kungenzeka futhi ukuthi ufike eNovorossiysk ngesitimela ngeKrasnodar.
Elinye ichweba elibalulekile laseRussia oLwandle Olumnyama kanye nedolobha elingumakhelwane elisondele kakhulu elisemngceleni weGreater Sochi. Lesi isikhungo esikhulu kunazo zonke zezimboni nezokuthutha, okuheha inani lezivakashi, kunezinye izindawo ezingasogwini lolwandle lwaseRussia. Kodwa noma kunjalo, uTufall ulungele uhambo losuku olulodwa ukusuka eSochi. Ngemuva kokubheka phansi kwedolobha, izindawo ezesabekayo kufanele zivakashelwe. Kunamawele ambalwa amahle azungezile, phezulu kwalawo yiDwala likaKiselev, indawo eyi-46 emile eqondile ewela olwandle. Izinsalela eziningi zamandulo zasendulo, ezinjengamatshe etafula, nazo zitholakala ngaseTufall.
Noma isiphi isitimela esise-elektrichka noma esisebangeni elide ukusuka eSokhi siyama eTuapse, ukuxhumana kwebhasi / marshrutka okuvamile kuyatholakala. Lindela i-2 - amahora we-2,5 ohambweni lwendlela eyodwa ukusuka eCentral Sochi.